Tag: Mgbakwunye | Martech Zone
Ndi ozo: Chọpụta, Meewanye, Tụọ, Kwalite, Ọchịchị
Tuesday, October 1, 2013 Fraịde, Septemba 27, 2013 Douglas Karr
Ndị ụlọ ọrụ anaghị eji ikike dị ike ha nwere n’ime arụ ọrụ ma a bịa n’ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị na-elele oge niile ka ụlọ ọrụ na-eji mmadụ 1 ma ọ bụ 2 na-elekọta mmadụ mgbasa ozi folks iji jikwaa ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ media ọnụnọ. Ha na-arụsi ọrụ ike, ha na-ekesa oke ọdịnaya, mana ha nọ na afụ nke ha ma a bịa n'ịkwalite ọdịnaya ha. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịsọ mpi n'ezie, gịnị kpatara na ị naghị enye ndị ọrụ gị nsogbu iji nyere gị aka ịkwalite gị
Ọnwụ nke Agency of Record
Wednesday, December 1, 2010 Thursday, July 2, 2015 Douglas Karr
Ihe odida ala ahụ na-akụda ụlọ ọrụ. N’izu gara aga, anọghị m na-erughị ọkpụkpọ ahịa 5 ebe atụmanya ahụ enweelarị onye na-eweta ọrụ, na-ahọrọ onye na-eweta ọrụ, ma ọ bụ nweela ụlọ ọrụ. Otu ụlọ ọrụ goro anyị ka ha bulie ogo njin ọchụchọ ha. Mgbe m nyochachara saịtị ha n'okpuru obere nkeji, m mere ka ha mata na ọ ga-abụ nnukwu ọrụ nyere CMS oge ochie ha. Ha kpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ
Wednesday, December 1, 2010 Thursday, July 2, 2015
Indiana: Isi obodo ahia ahia nke uwa
Na Tọzdee, Septemba 21, 2010 Sọnde, Febụwarị 9, 2014 Douglas Karr
TechPoint na-ekwuputa nke ọma Indiana's Measured Marketing Initiative, mgbasa ozi mmekọrịta mba na-eme ka Indiana dị ka onye ndu nke ngwa ahịa azụmaahịa na-eto ngwa ngwa, nke TechPoint chepụtara dịka ahịa atụpụtara. Ebumnuche Azụmaahịa Ebumnuche: Mee ka ndị mmadụ mata na mpaghara a na-emepe ụfọdụ ngwaahịa na ọrụ ndị kachasị ọkaibe na mba ahụ ma a bịa na mbọ ahịa na teknụzụ sitere na ya. Mee ndị ahịa maka azụmaahịa dị ugbu a site n'ọkwalite mba. Nke a,
Tuesday, September 21, 2010 Sunday, February 9, 2014